Huawei dia manambara ny fepetra ofisialy momba ny Huawei Y9s Androidsis
Huawei dia manambara ny fepetra ofisialy momba ny Huawei Y9s
El Huawei Y9s Iray amin'ireo finday avo lenta antonony manaraka ity. Ny mpanamboatra sinoa dia efa nanambara izany ary, mba tsy hanakorontana ny sain'ny besinimaro amin'ny zava-miafina, dia efa naneho ny toetrany sy ny masontsivana manokana momba azy io tao anaty famoahana vao haingana miaraka amin'ireo sary ofisialy.
Miatrika a tapaky ny volana isan-karazany tena mahaliana fa miaraka amin'ny fakan-tsary eo anoloanaey, noho izany, endrika amam-borona somary mihena. Ireo tombony hafa dia tsy dia taraiky any aoriana, ary omarinay eto ambany.
Araka ny navoakan'ny orinasa ao amin'ny tranonkalany, Ny Huawei Y9s dia terminal iray izay misy fàfana diagonal FullHD + UltraView 6.59-inch. Ny tahan'ny efijery amin'ny vatana dia tsy voalaza, saingy mety ho 19.5: 9 izy io, noho izany ny vahaolana amin'ny tontonana dia 2,340 x 1,080 teboka. Toa ity, ho fanampin'izany, ny teknolojia LCD IPS, satria ny mpamaky ny dian-tànana dia tsy mampiditra azy ao aminy; fa kosa, eo amin'ny ilany ankavanan'ny fitaovana izy, eo amin'ny bokotra herinaratra sy hidin-trano, eo ambanin'ny bokotra misy azy fotsiny.
Huawei Y9 amin'ny karazany roa
Misy telo miakatra eo amin'ny tontonana aoriana. Ny sensor voalohany an'io dia 48 MP misy aperture f / 1.8, raha ny sensor roa kosa dia zoro mirefy 8 MP misy aperture f / 2.4 ary sehatry ny fahitana 120 ° sy 2 MP misy vava f / 2.2. Ny fakantsary selfie 16 MP dia hapetraka ao anaty boaty pop-up hisorohana ny fampiasana ny takona na ny lavaka ao amin'ny tontonana.
Ny Huawei Y9s dia miasa mitovy amin'izany ihany Kirin 710F processeur ary manana RAM 6 GB ary fitehirizana 128 GB izay azo hitarina amin'ny alàlan'ny slot microSD (512GB max.). Ny telefaona dia misy bateria 4,000 mAh miaraka amin'ny fanohanan'ny famandrihana haingana 10 watt amin'ny alàlan'ny port USB Type-C.
Ny Huawei Nova 6 dia tafaporitsaka tanteraka niaraka tamin'ny famaritana sy ny vidiny rehetra
Huawei dia handefa ny telefaona miaraka amin'ny EMUI 9.1 avy ao anaty boaty miorina amin'ny Android 9 Pie. Tokony hanomboka tsy ho ela ny Huawei Y9s, na dia tsy tena fantatsika aza hoe rahoviana no ho tonga ny daty fandefasana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Huawei dia manambara ny fepetra ofisialy momba ny Huawei Y9s
Ny Xiaomi Mi CC9 Pro dia mahazo isa mitovy amin'ny Huawei Mate 30 Pro ao amin'ny DxOMark
Snapdragon 865 dia haseho amin'ny voalohan'ny volana Desambra